Ukuhlaselwa kwabafundi baseSoweto - 16 Juni, 1976
Imbali kunye neNkcubeko Iziganeko ezibalulekileyo
Icandelo 1: Imvelaphi yokuvukela
Xa abafundi besikolo esiphakamileyo saseSoweto baqala ukukhankanya ngemfundo engcono ngomhla we-16 Juni 1976, amapolisa ayiphendula ngeendwangu zengqumbo kwaye ahlala nezibhamu. Kukhunjulwa namhlanje ngeholide yesizwe saseMzantsi Afrika , usuku loLutsha, oluzukisa bonke abantu abaselula abalahlekelwa ubomi babo emzabalazweni wokulwa noHlaliswano kunye neBantu leMfundo.
Ngomnyaka we-1953 uRhulumente woBandlululo wenza uMthetho weBantu weMfundo eBantu , owasekwa kwiSebe leMfundo leMnyama kwiSebe leMveli.
Indima yale nkonzo yayiza kubandakanya ikharityhulam efanelwe " uhlobo kunye neemfuneko zabantu abamnyama. " Umbhali womthetho, uDkt. Hendrik Verwoerd (ngoko uMphathiswa weMveli, uMphathiswa-ntloko), wathi: " Abahlali [abamnyama ] kufuneka bafundiswe ukususela kwiminyaka yobudala ukuba ukulingana nabantu baseYurophu [abagcini] abayena kubo. "Abantu abamnyama babengenakufumana imfundo eya kubakhokelela ukuba babe nesifiso kwizikhundla abaza kuvunyelwa ukuba bahlale kuluntu. Kunoko bafanele bafumane imfundo eyenzelwe ukuba banikeze izakhono zokukhonza abantu babo kwiindawo zokuhlala okanye ukusebenza kwimisebenzi engaphantsi kwama-white.
Imfundo yaseBantu yenza ukuba abantwana abaninzi eSoweto baye esikolweni kuneenkqubo zakudala zezithunywa zevangeli, kodwa kwakukho ukungabi nakakhulu kwezibonelelo. Uwonke wonke uluntu luye lwavela kwi-46: 1 ngo-1955 ukuya ku-58: 1 ngo-1967. Amagumbi okufundela ngokugqithiseleyo asetyenziswe kwi-rota.
Kwakukho ukungabikho kootitshala, kwaye abaninzi balabo bafundisayo babengafanelekanga. Ngo-1961, kuphela i-10 ekhulwini yabafundisi abamnyama abaphethe isitifiketi seematriki [unyaka odlulileyo wesikolo esiphakeme].
Ngenxa yenkqubo yomgaqo-nkqubo wasekhaya, akukho zikolo eziphakamileyo ezakhiwa eSoweto phakathi kowe-1962 no-1971-abafundi babefuna ukufudukela kwilizwe labo elifanelekileyo ukuba baye kwiikolo ezandul 'ukutsha.
Emva koko ngo-1972 urhulumente wanikela ingcinezelo evela kwishishini ukuphucula inkqubo yeBantu yeMfundo ukuze ihlangabezane neemfuno zezoshishino zabasebenzi abamnyama abaqeqeshiwe. Izikolo ezitsha ezingama-40 zakhiwe eSoweto. Phakathi kowe-1972 no-1976 inani labafundi ezikolweni eziziisekondari landa ukusuka ku-12,656 ukuya ku-34,656. Omnye wabantwana abahlanu baseSoweto babeya esikolweni esiprayimari.
Olu konyuka ekuhambeni kwesikolo esiphakathi kolwazi lube nempembelelo ebalulekileyo kwinkcubeko yolutsha. Ngaphambili, abaninzi abantu abatsha bachitha ixesha eliphakathi kokushiya isikolo esiprayimari nokufumana umsebenzi (ukuba babe nethamsanqa) kwiimigulane, ebenokungaqondi nayiphi na ipolitiki. Kodwa ngoku abafundi basekondari babeziqulunqa ngokwabo, besazisi bezopolitiki. Ukwahlula phakathi kweengcambu kunye nabafundi kuphela kwavelisa umqondo wokubambisana kwabafundi.
Ngowe-1975 uMzantsi Afrika wangena ngexesha lokudandatheka kwezoqoqosho. Izikolo zabulawa yindlala - urhulumente wasebenzisa u-R644 ngonyaka ngemfundo yabafundi abamhlophe kodwa ngu-R42 kuphela kumntwana omnyama. ISebe leMfundo leBantu liye lazisa ukuba lisusa uMgangatho wesi-6 ukusuka kwizikolo eziprayimari. Ngaphambili, ukwenzela ukuqhubela phambili kwiFomu 1 yesikolo samabanga aphakamileyo, umfundi wayenokufumana ukupasa kweyokuqala okanye yesibini kwi-Standard 6.
Ngoku uninzi lwabafundi bangaphumelela kwisikolo esiphakamileyo. Ngowe-1976, abafundi abangama-257,505 ababhalise kwifom ye-1, kodwa kwakukho indawo yama-38,000 kuphela. Ngenxa yoko abaninzi abafundi bahlala esikolweni samabanga aphantsi. Chaos yavela.
I-African Students Movement, eyasungulwa ngo-1968 ukuvakalisa izikhalazo zabafundi, yatshintsha igama layo ngoJanuwari 1972 kwi-Movement of Students Movement (SASM) kwaye yazibophezela ekwakheni intlangano kazwelonke yabafundi abaphakamileyo abaza kusebenza noBlack Consciousness (BC) umbutho kwiiyunivesithi ezimnyama, i-South African Students 'Organization (SASO). Le link kunye nefilosofi ze-BC zibalulekile njengoko zanikeza abafundi ithuba lokuzixabisa ngokwabo njengabantu abamnyama kwaye banceda abapolitiki ukuba bancede.
Ngoko ke, xa iSebe leMfundo likhuphe umyalelo walo ukuba isiBhuluke sibe yilwimi lokufundisa esikolweni, bekuye kwimeko esele yenzeke.
Abafundi banqabe ukuba bafundiswe ngolwimi lomcinezeli. Ootitshala abaninzi abazange bakwazi ukuthetha isiBhulu, kodwa ngoku bekufuneka bafundise izifundo zabo kuyo.
16 Juni 2005 , Usuku lomntwana waseAfrika>
Eli nqaku, 'ngoJuni ka-16 kuVuka kwabafundi' (http://africanhistory.about.com/od/apartheid/a/Soweto-Uprising-Pt1.htm), inguqu ehlaziywe yinqaku yokuqala eyavela kwi-About.com 8 Juni 2001.
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1880 ukuya ku-1889
10 Ababalulekileyo baseMerika baseMerika
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1850 ukuya ku-1859
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1840 ukuya ku-1849
Icala laseS Scottsboro: Isihlandlo
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: ngo-1965 ukuya ku-1969
Umzekelo weJava Code for Building a Simple GUI Isicelo
I-Tonatiuh - I-Aztec UThixo weLanga, Ubutyebi kunye Nemibingelelo
Ukuqonda ulwaphulo-mthetho lokuCandwa
Inkqubo yeSiqendu Inkcazo